Zaka tsara : politika… tsy ihinanana | NewsMada
Amin’izao fiandohan’ny taona izao: raikitra sy manomboka koa ny politika, na noho ny fisian’ny vokatry ny fifidianana loholona natao ny 29 desambra ihany aza. Mitondra inona eo amin’ny fiainan’ny vahoaka ifotony ny politika? Tsy fandriampahalemana izao, faharavam-pananana amin’izany, kere, tsy fisiana asa…
Ho an’ny sarambabem-bahoaka, eo ihany ny eo: miharatsy aza… Politika tsy ihinanan-kanina? Mbola izay manao azy ihany no mahazo tombontsoa sy velona aminy. Farafaharatsiny, mba misy politika ho amin’ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka amin’izay ahay. Tsy mbola mahamaika aloha izany izao?
Fahamarinan-toerana politika eto an-toerana hoe ahafaha-miasa, fanamafisana ny fifandraisana amin’ny any ivelany hahazoam-bola…. Izany ihany no mibahan-toerana? Hany ka tsy misy tokotaniny izay sosialim-bahoaka. Tsy ny vahoaka ve no antom-pisian’ny fitondrana? Miova taona, miova atao…